प्रचण्ड पक्राउ सरकार नेकपा नेपाली काँग्रेस मृत्यु केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री राशिफल भारत चितवन अमेरिका नेपाल प्रहरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड
ज्ञान-विज्ञान राशिफल लोकसेवा हेल्थ टिप्स
७ वर्षीय बालकको मुखबाट ५२६ दाँत निकालियो, के हाे वास्तविकता ?
लाेकपाटी न्यूज १७ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:५७ 0
एजेन्सी। भारतको चेन्नाईस्थित सविता डेन्टल कलेजका डाक्टरहरुले एक ७ वर्षीय बच्चाको मुखबाट ५२६ वटा दाँत निकालेको दाबी गरेका छन् । डाक्टरहरुका अनुसार मानिसको मुखबाट यति धेरै दाँत निकालिएको यो विश्वकै पहिलो घटना हो । उनीहरुले यस स्थितिलाई…
सरकारी कार्यालयमा बादँर पुगेपछि…
लाेकपाटी न्यूज १६ श्रावण २०७६, बिहीबार १४:४० 0
पछिल्लो समय भारतको केन्द्रीय सरकारी कार्यालय बाँदर आतङ्कले हैरान भएको छ। प्रधानमन्त्री भवनदेखि सबै प्रमुख मन्त्रालयहरुमा बाँदरका सेनाले कब्जा जमाउन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरुलगायत सर्वसाधारण समेत त्रासमा बस्नु परिरहेको बताइएको छ। यसरी…
लाेकपाटी न्यूज १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १७:३४ 0
एजेन्सी। सुन्दा पत्यार नलाग्ने तर सत्य कुरा थाहा पाउँदा तपाईलाई पनि अचम्म लाग्न सक्छ। १४ वर्षका बालक विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हुन् भन्दा पक्कै पनि विश्वास नलाग्न सक्छ। तर यो सत्य हो। याशा एस्ले जम्मा १४ वर्षका भए। १४ वर्षको कलिलो उमेरमा नै…
४७ वर्ष पुरानो जुत्ता पाँच करोडमा बिक्री, के छ खास ?
लाेकपाटी न्यूज १४ श्रावण २०७६, मंगलवार १४:४७ 0
नाइकी जुत्ताको लागि विश्व विख्यात ब्रान्ड हो। यसका जुत्ताहरु निकै महँगा साथै टिकाउ हुने गर्दछन्। हालै नाइकीको एक पुरानो जुत्ता चार करोड ८३ लाख ८० हजार नेपाली पैसामा विक्रि भएको छ। नाइकीको सह–संस्थापकले डिजाइन गरेको एक जोर ऐतिहासिक जुत्ता…
विहारमा भेटियाे अनाैठाे ढुङ्गा, उल्कापिण्ड भएकाे आशङ्का
लाेकपाटी न्यूज ११ श्रावण २०७६, शनिबार १२:११ 0
एजेन्सी/काठमाडाैं, ११ साउन । विहारको एउटा गाउँको धान खेतमा भेटिएको फुटबल आकारको एक ढुंगा उल्कापिण्ड भएको आशंका गरिएको छ । सीएनएनका अनुसार ढुंगालाई अहिले ‘विहार संग्राहलय’मा प्रदर्शनमा राखिएको छ । तर यसलाई तत्कालै श्रीकृष्ण साइन्स सेन्टरमा…